कांग्रेस प्रबत्ता विश्‍वप्रकाशको आक्रोश : कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा, गच्छदारलाई मुद्दा ? — SuchanaKendra.Com
कांग्रेस प्रबत्ता विश्‍वप्रकाशको आक्रोश : कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा, गच्छदारलाई मुद्दा ?
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कांग्रेस आत्तिएको छ । उसले विभिन्न तरिकाबाट अनेक प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । बुधबार अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आक्रोश पोखेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नितिगत निर्णय। एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा, शर्माले ट्वीटमा लेखेका छन् ‘मुद्दा कसलाई ? विजय गच्छदारलाई।सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो।